स्मृतिमा सुरेश वाग्ले – eratokhabar
२०७८, ६ असार आइतबार
स्मृतिमा सुरेश वाग्ले
गुणराज लोहनीलेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्
ई-रातो खबर २०७५, २८ भदौ बिहीबार १४:१६ September 13, 2018 649 Views
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य कमरेड सुरेश वाग्ले ‘वासु’ ले २०५६ साल भदौ २३ गते सहादात प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँको सहादतको दिन जतिजति टाढा हुँदै गइरहेका छन् वासुका योगदानका सन्दर्भहरू पनि टाढिँदै गएका छन् । यो साँच्चै राम्रो कुरा होइन । वासुले महान् जनयुद्धको तयारी, त्यसको सुरुआत र विकास हुँदै जाँदा निर्वाह गरेको भूमिका र पार्टी नेतृत्वको उच्च तहको बलिदानको कोटा पूरा गर्नुभएको थियो । जनयुद्धमा पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो तहबाट दुस्मनको जीवन भिक्षालाई दुत्कार्दै मृत्यु स्वीकार गर्ने एक जोदाहा, उच्च नेता हुनुहुन्थ्यो । सर्वहारावर्गीय विचार, राजनीति र वर्गप्रति निष्ठावान् वासुले रगत बगाएको पार्टीका मुख्य नेताहरू पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छन् । अहिले उहाँको पार्टीको मुख्य नेताले सिङ्गो पार्टीलाई एमालेजस्तो वासुको भनाइमा ‘टुकुचाको फोहोरको नाली’ मा मिसाएका छन् । यस्तो अवस्थामा कमरेड वासुलाई कसरी सम्झिने ? उहाँका योगदानको कदर कसरी गर्ने ? उहाँले खडा गरेको त्याग र बलिदानको मूल्यबोध कसरी गर्ने ? यी प्रश्नहरू सबै क्रान्तिकारीहरूका लागि यक्षप्रश्न भएर रहेका छन् ।
म यहाँ यी सबै प्रश्नहरूको जबाफ दिइराखेको छैन । कमरेड वासुको नेतृत्वमा मैले गर्न पाएको कामका अनुभव, अन्तिम दिनमा उहाँसँग भएका सहकार्य र मैले लिएको शिक्षाका बारेमा यहाँ केही कुरा राख्न उपयुक्त ठानेको छु ।
वासुसँगको औपचारिक परिचय
सुरेश वाग्लेको नाम मैले २०४८ सालको संसदीय चुनावको बेलामा सुनेको थिएँ । उहाँ तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट गोरखाबाट लड्नुभएको थियो । तर थोरै मतले मात्र हार्नुभएको थियो । बीचमा धेरैपटक भेट त भए तर दोहोरो कुरा हुन सकेको थिएन ।
जनयुद्ध सुरु भैसकेको थियो । म नवचेतना त्रैमासिक विचार प्रधान पत्रिकाको प्रधानसम्पादक बनेको थिएँ । सायद २०५३ सालमा हुनु पर्दछ । टेकबहादुर थापा जो नारायणी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए । त्यसै विद्यालयमा म अध्यापन गर्दथेँ । एक दिन बिहान उनले आफ्नो घर आउन सूचना पठाएका थिए । म तोकिएको समयमा पुगेँ । त्यहाँ वासुजी नीलो सर्ट र इस्टकोट लगाएर बस्नुभएको रहेछ । चितवनका अन्य बुद्धिजीवी पनि उपस्थित थिए । सबैसँग परिचय भयो । त्यही क्रममा मेरो पनि परिचय दिने पालो आयो । मैले मेरो नाम भनेँ । मेरो नाम सुनेपछि उहाँले आश्चर्यजस्तो भाव व्यक्त गर्नुभएको थियो– ए, मैले त तपाई अलि प्रौढ हुनुहुन्छ होला भन्ठानेको थिएँ । युवा पो हुनुहुँदो रहेछ । हुन पनि त्यो समयमा केवल २७ वर्षको थिएँ । त्यो भेटघाटमा निकै लामो कुराकानी भएका थिए । हामीले गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा पनि केही कुराहरू गर्नुभयो उहाँले ।
बीचमा नियमितजस्तो भेट भैराखेको थियो । त्यही क्रममा २०५४ सालमा उहाँले हामीलाई बोलाएर दसैँको अवसरमा रोल्पामा जान भन्नुभएको थियो । हामी ५ जना जान तयार भएका थियौँ । मेरो घुँडामा चोट लागेको थियो । केही दिनअघि भरतपुरको ओरालोमा रिक्साले लडाइदिएर घुँडामा गहिरो चोट लागेको थियो । त्यसैले म खोच्याएर हिँडिरहेको थिएँ । वासुले ‘लोहनी सरले घुँडाको एक्स—रे गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो । रोल्पाका पहाडमा हिँड्न घुँडाको समस्या हुन्छ कि भन्ने उहाँको कुरा थियो ।
घुँडाको चोटको पीडाभन्दा पनि रोल्पामा जान पाउने भएकोमा म बढी उत्सुक भैराखेको थिएँ । म त्यसै दिन घुँडाको एक्स—रे गर्न गएँ । घुँडाको पाङ्ग्रो ३ टुक्रा भएको रहेछ । यही कारणले म रोल्पा जानुभन्दा पनि उपचारका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको थियो । बस चढेर उर्मिला र म काठमाडौँ लाग्यौँ । वीर अस्पतालका अर्थोपेडिक डक्टर शिव अधिकारीले घुँडाको पटेलालाई मिलाएर स्ल्याब राखिदिएका थिए । त्यस समयमा मैले ४५ दिनसम्म बैसाखी टेकेर हिँड्नुपरेको थियो ।
वासुसँगको एक वर्ष
मेरो जीवनमा एउटा नयाँ मोड आयो । मलाई २०५५ साल असोजमा चितवन जिल्ला पार्टी सदस्यमा चयन गरियो । त्यो समयमा चितवनमा केवल ९ सदस्यीय जिल्ला समिति बनेको थियो । चौथो विस्तारिक बैठकपछि पुनर्गठित उक्त कमिटीमा जिल्ला सेक्रेटरी थिए कुशल जसलाई विकेश पनि भनिन्थ्यो । सदस्यहरूमा घनश्याम दाहाल (अविनाश), रमेश रेग्मी (गोविन्द), केशव रिमाल (समर), मार्कण्ड्य गौतम (महेश), चित्रबहादुर श्रेष्ठ (गोपाल), म, कञ्चन खनाल (आकृति) र ईश्वरीप्रसाद खनाल (प्रतीक) थियौँ । उक्त कमिटीको पहिलो बैठक बस्यो । बैठकमा प्रमुख अतिथि तथा उपब्युरो इन्चार्जका रूपमा सुरेश वाग्ले ‘वासु’ आउनुभयो । त्यसपछिका सबैजसो बैठकमा उहाँ आउन थाल्नुभयो । चितवनको वर्गसङ्घर्ष, सङ्गठन विस्तार र सुदृढ योजना निर्माणमा निर्देशन गर्न थाल्नुभयो ।
उहाँ बढी नै अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अङ्ग्रेजी अलि कमजोर थियो । त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषाका दस्ताबेज, लेखहरूलाई म नेपालीमा भाषान्तरण गरिदिन्थेँ । त्यसै बेलामा पेरू कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक दस्ताबेज अङ्ग्रेजीमा आएको थियो । त्यो निकै लामो र दुर्लभ पनि थियो । मैले महिनौँ दिन लगाएर नेपालीमा रूपान्तरण गरेको थिएँ । वासुको वैचारिक र दार्शनिक स्तर पनि राम्रो थियो । त्यसैले उहाँसँग कुरा गर्न र उहाँका कुरा सुन्न आनन्द आउँथ्यो । दर्शनप्रतिको मेरो बढी चासो वासुजीले नै बढाइदिनुभएको थियो । वासुजीको वैचारिक दृढता, राजनीतिक स्पष्टता र साङ्गठनिक कुशलता हुँदाहुँदै पनि चितवनमा केही समस्याहरू देखापरेका थिए ।
ठीकै भैराखेको थियो तर सेक्रेटरीको कार्यशैली बेफजुल खर्च र आर्थिक अपारदर्शीका कुराहरू उठिरहेका थिए । साथै आफूलाई मनपरेका कार्यकर्तालाई भौतिक वस्तुहरूद्वारा प्रोत्साहित गर्ने र आफूलाई मन नपर्नेहरूलाई धकेल्दै कुनासम्म पु¥याउन थालेका थिए । उनी राजनीतिक–वैचारिक रूपमा भन्दा पनि मूढे बलको भर पर्दथे । उनका यिनै कार्यशैलीका कारण जिल्ला पार्टीमा गुट देखापरेको थियो । यसरी गुट नै देखा पर्दा कुशलले सतर्क र सजग होलान् भन्नुको सट्टा गुटलाई नै प्रोत्साहित गर्नतिर उद्यत देखिन थालेका थिए । यसरी वर्गसङ्घर्षको भीषणता, दुस्मनको घेराबन्दी, क्रान्तिको कार्यभारलाई बेवास्ता गर्दै उनी जसरी अगाडि बढ्दै गए त्यसमा पनि आर्थिक रूपमा उनी झनै अस्पष्ट र अपारदर्शी हुँदै गए त्यसपछि उनका विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता नै भयो ।
मैले उठाएका कुरामा चित्रबहादुर श्रेष्ठ, घनश्याम दाहाल, मार्कण्ड्य गौतम र ईश्वरीप्रसाद खनाल सहमत भएका थिए । हामीले जिल्ला इन्चार्ज रहेका श्रीराम ढकाललाई धेरैपटक जानकारी पनि दिएका थियौँ । वासुसँग पनि कुरा राखेका थियौँ ।
२०५६ सालको संसदीय चुनावपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै थियो । मेरो नेतृत्वमा म, चित्रबहादुर, घनश्याम दाहाल, मार्कण्ड्य गौतम र ईश्वरी खनालले कुशलका आर्थिक अनियमितता, राजनीतिक, वैचारिक समस्या र साङ्गठनिक अराजकतालाई लिपिबद्ध गरेर एउटा पत्र तयार पारेर हस्ताक्षर गरी पठाएका थियौँ । उनले गरेका आर्थिक हिनामिनाको स्पष्ट हिसाबकिताब हुनुपर्ने, स्पष्ट भएन भने आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो माग थियो । साथै उक्त पत्रमा कुशलले चितवनजस्तो जिल्लाको नेतृत्व पनि गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका थियौँ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकपछि भदौ ४, ५, ६ र ७ गते चार दिनसम्म चितवन जिल्लाको बैठक बस्यो । बैठकमा अन्य प्रस्तावहरू त हुने नै भयो तर मुख्य रूपमा कुशलमाथि केन्द्रित हुन पुगेको थियो । माथिबाट नै उनलाई जिल्ला सेक्रेटरीबाट हटाइएको रहेछ । साथै सबै हिसाब जिल्ला कमिटीमा स्पष्ट पार्ने भन्ने पनि रहेछ । उनले हिसाब मिलाउन खुबै कोसिस गरेका थिए तर हिसाब मिल्ने कुनै गुन्जायस नै थिएन । किनभने उनले आर्थिक हिनामिना गरेका थिए । कुनै हिसाबकिताब राखेका थिएनन् अनि कहाँ मिल्थ्यो र हिसाबकिताब ।
धेरै समयको बहसपछि आफैँले लिखित रूपमा दिएको पत्रबाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, घनश्याम दाहाल, मार्कण्ड्य गौतम र ईश्वरी खनालले हात झिकेछन् । म मात्र आफ्नो अडानमा रहिराखेँ । मलाई वासुले खुबै सम्झाउनुभयो, मैले मान्दै मानिनँ । म आफ्नो अडानबाट टसको मस नभएपछि वासुले बैठकमा नै मलाई अलि कडा स्वरमा भन्नुभयो, ‘ल भन्नुस् यो मान्छेलाई के गर्ने ? यसको घर पार्टीले कब्जा गर्ने ?, एउटा मान्छे उत्पादन गर्न पार्टीले कति लगानी गर्नुपर्छ, थाहा छ ?’ कुशल पनि त्यहीँ नै थिए । वासुले कुशललाई यो उपब्युरोबाट नै सरुवा गराइएको जानकारी दिनुभयो । साथै मैले कुशललाई दिएको पैसाको पूर्ण हिसाब बुझाउने सर्तमा मैले पनि कुरा उठाउन छाडिदिएँ ।
खाना, नास्ता खाने, बैठक स्थगन भएका बेलामा वासुजीले मलाई धेरै कुरा भन्नुभएको थियो । ‘लोहनी सर, तपाईंबाट पार्टीले धेरै अपेक्षा राखेको छ । तपाईं पढ्न, लेख्न जानेको मान्छे, पत्रकारितामा पनि राम्रो दखल राख्नुहुन्छ, अध्ययनशीलता पनि छ । तपाईंले अनुसन्धानमा लाग्नु पर्दछ’ भन्नुभएको थियो । उक्त बैठकले मलाई उत्साहित पनि बनाएको थियो ।
२०५६ साल भदौ २३ गते बेलुका जिल्ला इन्चार्ज र म शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रशिक्षणमा जानुपर्ने भयो । सम्पर्क शिवनगरका बालकृष्ण ढकालको घरमा दिइएको थियो । उनी अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका थिए । म भरतपुरबाट साइकल चढेर साँझ मात्र पुगेको थिएँ । कार्यक्रम राती हुने गथ्र्यो । बेलुकातिर जिल्ला इन्चार्जको एउटा पत्र मकहाँ आइपुग्यो । त्यो पत्रमा शिक्षकको प्रशिक्षणमा इन्चार्ज आउन नपाउने भएकाले मैले नै सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको थियो ।
अमर माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक जो पछि प्रधानाध्यापक पनि हुनुभएको थियो, उहाँको घरमा शिक्षक सङ्गठनका जिल्ला सदस्य सबै जम्मा भएका थिए । प्रशिक्षण, प्रश्नोत्तर गर्दा बिहान ६ बजेको थियो होला । भोलिपल्ट तीजको दिन थियो । साथीहरू सबै हिँडिहाले । मैले त्यहीँ हरि सरको घरमा खाना खाएँ । भदौको महिना, असाध्यै गर्मी थियो । त्यसमा अझ रातभर नसुतेकाले असहज भैराखेको थियो । तैपनि कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिलेको जस्तो सेल फोन थिएन । सीमित मात्रामा मात्र ल्यान्डलाइन फोनहरू थिए । त्यसमा पनि पार्टीले प्रयोग गर्ने सम्पर्क फोनहरू असाध्यै कम थिए । त्यसैले म इन्चार्जको सम्पर्कमा पुगेँ । इन्चार्ज मलाई नै पर्खेर बसिराखेका रहेछन् । त्यो समयमा शिक्षकहरूले तोकेको समयमा ठूलै रकम पार्टीलाई लेबीका रूपमा बुझाउँथे । चितवनमा त फेरि हाम्रो सङ्गठन असाध्यै राम्रो थियो । त्यसैले मसँग राम्रै पैसा पनि थियो ।
म इन्चार्जको सम्पर्कमा पुग्दा इन्चार्ज यसअघि भेट्दाजस्तो उत्सुक र हँसिला थिएनन् । मलाई लाग्यो, उनी बिरामी भएछन् क्या हो ? उनले आफू बसेको खाटमा नै बस्न सङ्केत गरे । हामीले हात मिलाएर अभिवादन आदानप्रदान गरेका थियौँ । अरू दिन उनी आफैँ ल भन्नुस्, कस्तो भयो कार्यक्रम भनेर सोध्थे । तर त्यस दिन सोधेनन् । अँध्यारो अनुहार लगाएर असाध्यै दुःखद् खबर छ लोहनी सर भने । उनको दुःखद् खबर भन्ने शब्दले निःशब्द बनायो । म उत्साहित भएर उनलाई रिपोर्टिङ सुनाउने र मसँग भएको रकम बुझाउने सुरमा थिएँ । इन्चार्ज नआएकोमा दुःख व्यक्त गरेका शिक्षकहरू मैले सबै कुरा बोलेर दोहोरो अन्तरक्रिया भैसकेपछि असाध्यै उत्साहित भएका थिए । त्यही उत्साह लिएर म इन्चार्ज भेट्न हतारिएर गएको थिएँ तर दुःखद् शब्दले मलाई निरुत्साहित बनायो र मेरो मन इन्चार्जको त्यो दुःखद् खबर सुन्न आतुर र त्रसित दुवै भयो । अँध्यारो अनुहार लगाउँदै उनको मुखबाट दुःखद् शब्दहरू निस्किँदै गए, ‘लोहनी सर, कमरेड वासु र वैरागीलाई दुस्मनले हत्या गरेरछ हिजो मात्र । त्यो खबर आउनेबित्तिक्कै मैले माथि खबर गर्नुपर्ने भएकाले म शिक्षकको कार्यक्रममा जान सकिनँ ।’ यी शब्दहरू मेरा लागि अप्रिय मात्र थिएनन्, अप्रत्यासित र अविश्वसनीय पनि थिए । म स्तब्ध बनेँ । मेरो छातीमा गह्रौँ ढुङ्गाले थिचेको जस्तो भयो । सास फेर्न अप्ठ्यारो महसुस भयो । म केही पनि नबोलीकन उनको कुरा मूर्तिवत् सुनि मात्र राखेको थिएँ ।
मेरा आँखाबाट आँसु झरिराखेका थिए । चलचित्रका दृश्यहरू उल्टो चलेको जस्तो हुन थाल्यो । वासुसँगका विगतका सहकार्य, बहस, छलफल र अझ त्यसमा पनि भर्खर बसेको जिल्ला समितिका दृश्यहरूले चिथोर्न थालेका थिए । म केहीबेर त्यहाँ बसेर बाहिर निस्किएको थिएँ । त्यहाँलाई एकजना साथी मोटरसाइकल लिएर पर्खिराखेका थिए । मेरा आँखा देखेर होला उनले प्रतिक्रिया जनाइहाले । मैले भने बाटोमा कुरा गरौँला भनेँ । बाटोभरि मेरा आँखा सुक्न सकेनन् । बाटोमा मैले ती साथीलाई दुःखद् खबर सुनाएँ जसरी मलाई इन्चार्जले सुनाएका थिए । उर्मिलासँग भेट हुनेबित्तिक्कै त्यो दुःखद् समारचार सुनाएँ । त्यो रात सुत्न सकिनँ । पेट पालिराख्यो । वासुको विगतले चिथोरिराख्यो । उर्मिलाले सम्झाइन्, ‘हामी पनि त्यही मुक्ति वा मृत्युको यात्रामा छौँ । हामीले सहनुपर्छ ।’ उनले भनेको सही रहेछ । उनले पनि वासुको पदचाप रोजिन् । वासुको बाटो हिँडिन् । उनी पनि सहिद भइन् ।
गएको भदौ ३ गते वासुले सहादत प्राप्त गरेको १९ वर्ष पुगेर २० वर्ष लागेको छ । उर्मिलाले २०५९ भदौ ३ गते अर्थात् वासुले सहादात प्राप्त गरेको ३ वर्षपछि सहादात प्राप्त गरिन् । वासुजी सहिद भएको मैले भोलिपल्ट थाहा पाएको थिएँ तर उर्मिला सहिद भएको २५ दिनपछि मात्र थाहा पाएँ । यी दुवैले भन्ने गर्दथे, हामी मुक्ति वा मृत्युको यात्रामा छौँ तर उनीहरूलगायत हजारौँले मृत्युयात्रा तय गरे । तर हामीले अहिलेसम्म मुक्ति पाएका छैनौँ । फेरि त्यही प्रतिबद्धता चाहिएको छ, मुक्ति वा मृत्यु । वासु र उर्मिलाले मानेका नायकहरूले मुक्तियात्रालाई चारधाममा परिणत गरेका छन् भने मृत्युलाई जीवनभिक्षामा ।
२०७५ भदौ २८ गते प्रकाशित
कलाविहीन नाटक !
नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड र नेतृ शिलु सर्वोच्चमा
महासचिव विप्लवद्वारा पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई उद्धार तथा राहत कार्यमा लाग्न निर्देशन
नेकपाका महासचिव विप्लवद्वारा गोरे दाईप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त
नेकपाद्वारा सहिद परिवारलाई खाद्यान्न व्यवस्थापन
नेपालमा विद्यमान दुई वटा गलत राजनीतिक ट्रेण्ड
अखिल (क्रान्तिकारी) कास्कीद्वारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
सर्लाहीमा महान् सहिद कुमार पौडेलको स्मृति सभा
मजदुर सङ्गठनद्वारा विपन्न परिवारलाई राहत बितरण
धनुषामा कुमार पौडेलको स्मृति सभा सम्पन्न
नेकपा दाङद्वारा समाजसेवी केसीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त
सिराहामा कुमार पौडेलको स्मृति सभा सम्पन्न